musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Vols kubva Kazakhstan kuenda kuMaldives paAir Astana izvozvi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Kazakhstan Breaking News • Nhau Dzakanaka • Maldives Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Vese vanofamba, kusanganisira avo vakabaiwa zvakakwana, vanoda gwaro rePCR rekuyedza risiri reChirungu kuti vapinde muRepublic of Maldives. Pamusoro pezvo, vafambi vanofanirwa kupedzisa Traveler Hutano Chiziviso maawa makumi maviri nemana vasati vaenda.
Air Astana inozivisa nendege dzakananga kubva kuAlmaty, Kazakhstan kuenda kuMurume muMaldives.
Kazakhstan kuenda kuMaldives ndege dzinozotangazve muna Gumiguru 9, 2021.
Nzira yeAir Astana Maldives inozoshandirwa neAirbus A321LR uye Boeing 767 ndege.
Air Astana ichatangazve nendege dzakananga kubva kuAlmaty kuenda kuMale muMaldives muna Gumiguru 9, 2021.
Ndege dzeAirbus A321LR neBoeing 767 dzichashanda munzira yeAlmaty-Male kanokwana pavhiki neChipiri, China, Mugovera neSvondo.
Air Astana ndege dzakamboshanda ku Marudhivhu kubva Zvita 5, 2020 kusvika Chivabvu 24, 2021, isati yambomiswa nekuda kwezvirambidzo zvehurumende.
Vese vanofamba, kusanganisira avo vakabaiwa zvakakwana, vanoda gwaro rePCR rekuyedza risiri reChirungu kuti vapinde muRepublic of Maldives.
Pamusoro pezvo, vafambi vanofanirwa kupedzisa Traveler Hutano Chiziviso maawa makumi maviri nemana vasati vaenda.
Mavisa achapihwa mahara paunosvika kuMale Airport.
Pakudzoka kuKazakhstan, vese vanofamba vanofanirwa kunge vaine chitupa chisina kunaka chePCR, kunze kweavo vakabaiwa jekiseni rakazara.
Air Astana ndiye anotakura mureza weKazakhstan, yakavakirwa mu Almaty.
Air Astana inoshanda yakarongwa, epamba uye epasi rese masevhisi munzira makumi matanhatu nenhanhatu kubva kunhandare yayo huru, Almaty International Airport, uye kubva kunhare yayo yechipiri, Nursultan Nazarbayev International Airport.
Almaty International Airport, yaimbove Alma-Ata Airport, inhandare huru yepasi rese 15 km kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweAlmaty, iro guta rakakura uye guta guru rekutengesa reKazakhstan.
Almaty International Airport iyo inonyanya kubhururuka nendege muKazakhstan, inotarisa hafu yenzvimbo dzevatakuri venyika uye 68% yemigwagwa yekutakura.